Xiaomi Black Shark Helo: qaababka, qeexitaanada iyo qiimaha | Androidsis
Xiaomi waxay si rasmi ah u soo saartay Black Shark Helo, taleefanka cusub ee ciyaarta oo leh 10 GB oo RAM ah
Haaruun Rivas | | Xiaomi
Kadib warar xan badan oo ku saabsan dhaxal sugaha taleefanka Xiaomi Black Shark, kaas oo loogu yeeri lahaa Black Shark 2, sidii la filayay, shirkadda Shiinaha ayaa bedeshay qoraalka, maadaama qalabku imika yimid, laakiin uusan la socon "2" cinwaanka. Waxaan tixraacay Black Shark Helo, casriga cusub ciyaaraha saxiixa taasi waxay la imaaneysaa horumar aad loo calaamadeeyay.
Qalabkani wuxuu ku faanaa awoodda xusuusta ee RAM oo ka weyn tan wixii heer sare ah ee hadda jira ee suuqa, sidaas darteed waa kan ugu horreeya ee soo bandhiga. Maxaa intaa ka badan, wuxuu dhexgaliyaa nidaam qaboojin oo aad ufiican taas oo aan uga hadli doono xagga hoose. Waan kuu soo bandhigeynaa!
The Black Shark Helo wuxuu leeyahay naqshad ka duwan tii ka horreysay. Wali waxay haysataa shaashad 18: 9 oo xoogaa yar yar, laakiin waxay ku beddelaysaa faahfaahinta. Mobilka sidoo kale wuxuu leeyahay khad cagaaran oo khafiif ah kaas oo ku socda dhabarka iyo geesaha.
Meel weyn oo ka mid ah dhabarka dambe ee terminaalka waxaa lagu daboolay muraayad. Aaggan waa meesha aad ku haysato labada kamaradood ee gadaal gadaal ah oo hadda si toos ah loogu hagaajiyay xariiq toosan oo ay weheliyaan iftiinka LED-ka iyo sawirka faraha.
Sidoo kale waxaa jira astaanta shark madow, taas oo hadda ifaysa mahadnaqa RGB LED ka hooseeya. Taasi maahan kaliya RGB LED qalabka; waxaa jira mid dhinac kasta oo ka mid ah jir kaas oo u wareegi kara 16.8 milyan oo midabo oo leh saameyn kala duwan oo ku saleysan ciyaaraha aad ciyaareyso.
1 Tilmaamaha iyo qeexitaannada Helo Madoow Shark
1.1 Wax kasta oo aad ugu baahan tahay waayo-aragnimo ciyaaraha aan laga adkaan karin
2 Macluumaadka farsamada
Tilmaamaha iyo qeexitaannada Helo Madoow Shark
Black Shark Helo wuxuu leeyahay shaashad dhererkeedu yahay 6.01-inch. Kaliya waxoogaa kama yara weynaato asalka, laakiin sidoo kale waa shaashad AMOLED oo ma ahan LCD sida kan uu keenay Black Shark. Waxay sidoo kale leedahay guntin farsamaysan oo muuqaal ah oo la shaqeeya muuqaalka AMOLED ee tayada sare ee HDR. Waxay sidoo kale leedahay taageero DCI-P3 iyo SRGB si ay u bixiso midab aad u ballaadhan.
Helo wuxuu leeyahay isla processor-ka Snapdragon 845 ee laga helo taleefanno badan oo heer sare ah oo la sii daayay sannadkan, laakiin Waa ganacsigii ugu horreeyay ee lagu helo 10 GB oo RAM ah. In kasta oo ay iyaduna leedahay noocyo kala duwan oo ah 8 iyo 6 GB oo RAM ah, iyo sidoo kale laba awood oo bannaan oo lagu kaydiyo gudaha: 256 iyo 128 GB. Gaar ahaan, taleefanka waxaa lagu bixiyaa noocyada soo socda ee RAM iyo xusuusta gudaha: 10 + 256 GB, 8 + 128 GB iyo 6 + 128 GB.
Dhinaca kale, aynu xusuusnaano in qalabka asalka ahi leeyahay nidaam qaboojiye dareere ah si uu heerkulka taleefanka ugu yaraado inta uu ciyaarayo. Waa hagaag, marka laga hadlayo Black Shark Helo, tan waa la hagaajiyay: waxaa jira laba tuubbo oo dareere ah oo qaboojiye ah oo isku jira 10.000 mm². Tuubooyinka qaboojiyaha waxay yareyn karaan heerkulka processor-ka illaa 12 ° C waxayna kordhin karaan waxtarka kuleylka illaa 20 jeer.
Sida qaybta sawirada, Terminalku wuxuu leeyahay laba kamaradood oo gadaal ah oo ku qalabaysan sirdoon macmal ah: dareeraha koowaad ee 12 MP iyo dareeraha labaad 20 MP. Kaamirooyinka ayaa aqoonsan kara ilaa 206 muuqaal oo kala duwan waxayna sawiro ku qaadan karaan saameynta bokeh sida cillad la’aan. Taa baddalkeeda, kamaradda hore waa shidma 20 MP oo sidoo kale ku qaadan kara sawirro qaab muuqaal ah.
Wax kasta oo aad ugu baahan tahay waayo-aragnimo ciyaaraha aan laga adkaan karin
Helo wuxuu leeyahay kuhadallo horudhac ah oo maqal ah. Codka ay bixiyaan waa mid sifiican ugafiican ugana mahadcelinaya gooynta weyn ee afhayeenka sare (isku mid ah salka hoose). Intaas waxaa sii dheer, waxay wadataa kumbiyuutar Smart PA ah iyo Teknolojiyada codka Biso ee Black Shark. Waxay sidoo kale leedahay saddex makarafoon oo loogu talagalay wicitaano cad inta lagu jiro ciyaarta.
Guud ahaan, waxaa jira waxyaabo badan oo cusub oo dhanka software-ka ah, sida Gamer Studio, oo ah barnaamij u heellan oo dadka isticmaala ay wax ka beddeli karaan dejinta CPU, ogeysiisyada, dhawaaqyada, iyo inbadan. Waxa kale oo jira Wakhtiga Shark, oo ah muuqaal ku saleysan AI oo si otomaatig ah u duubaya waxyaabaha muhiimka ah sida aad u ciyaarayso oo kuu oggolaaneysa inaad iyaga la wadaagto. Furaha loo yaqaan 'shark shark' wali wuu u jiraa firfircoonida DND iyo kobcinta waxqabadka hal-fure-saxaafadeed sidoo kale.
Shirkadda ayaa sidoo kale ku dhawaaqday boodhadh cusub oo loogu talagalay Helo. Kani wuxuu leeyahay boodhadh taabasho wareegsan iyo badhannada tallaabada XYAB. Waxay sidoo kale ku dhawaaqeen kiis qaboojiye ah oo ay kujiraan taageerayaal qaboojiyeyaal ah iyo dekado loogu talagalay lacag bixinta iyo maqalka iyo kiis difaaca 3D ah.
XIAOMI SHARK MADOW
MUUQAAL AMOLED 6.01 "FullHD + 2.160 x 1.080p (18: 9) oo wata HDR / 450 nits dhalaal
PRORESOR Qualcomm Snapdragon 845
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 128 / 256 GB (UFS 2.1)
CHAMBERS Gadaal: labalaab 12 iyo 20 MP (f / 1.75) / Xagga hore: 20 Xildhibaan (f / 2.2)
BATARY 4.000 mAh oo leh Quick Charge 3.0 lacag deg deg ah
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 8.1 Oreo oo leh Joy UI
MUUQAALO KALE Akhristaha faraha gadaal. Aqoonsiga wajiga. Labalaabka hore. WiFi 802.11 ac. Nooca USB C. Bluetooth 5.0. Nidaamka qaboojinta laba-geesoodka ah. Furayaasha jirka
Hadda Xiaomi Black Shark Helo waxaa lagu iibin doonaa oo kaliya Shiinaha, iyo waxay noqon doontaa laga bilaabo Oktoobar 30 qiimaha hoos ku xusan:
Xiaomi Black Shark Helo (6GB RAM / 128GB ROM): 3.199 yuan (qiyaastii. 402 euro).
Xiaomi Black Shark Helo (8GB RAM / 128GB ROM): 3.499 yuan (qiyaastii. 440 euro).
Xiaomi Black Shark Helo (10GB RAM / 256GB ROM): 4.199 yuan (qiyaastii. 529 euro).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi waxay si rasmi ah u soo saartay Black Shark Helo, taleefanka cusub ee ciyaarta oo leh 10 GB oo RAM ah
Snapdragon 675: processor-ka cusub ee dhexdhexaadka ah ee shirkadda ayaa halkan jooga